दोश्रो बजार सुस्ताउनुको यस्तो छ कारण - नेपालबहस
दोश्रो बजार सुस्ताउनुको यस्तो छ कारण
| १६:३५:०७ मा प्रकाशित
२७ असोज, काठमाडाैं । आज शेयरबजारमा गिरावट देखिएको छ । नेप्से परिसूचक ९ दशमलव ४२ अंकले घट्दै १५६८ दशमलव ५९ को विन्दुमा बन्द भएको छ । आज १९३ कम्पनीको शेयर कारोवार हुँदा १ अर्ब ८१ करोडको शेयर कारोवार भएको छ ।
नेप्से परिसूचक शुन्य दशमलव ६० प्रतिशतले घटेको छ । बजार १५८३ दशमलव २९ को विन्दुमा खुलेकोमा बजारको उच्च विन्दु १५८४ दशमलव ७० रहेको थियो । बजारले १५६७ दशमलव २४ को न्यून विन्दु समातेको थियो ।
बजारको आजको प्रवृत्ति हेर्दा बजारमा बिक्रीकर्ताहरु हावी भएको देखिन्छ । त्यस्तै आज बजार न्यून विन्दुको वरीपरी नै बन्द भएको छ । यसलाई ईण्ट्राडे लो भनिन्छ र यस्तो प्रवृत्तिलाई सकारात्मक मानिदैन्।
असोज मसान्तमा व्याज तिर्नुपर्ने प्रेसर र दशैँ नजिकिदै जाँदा बजारमा शेयर बेच्ने नै हावी भएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । वाणिज्य बैंक उपसुचकमा चमक आउँन नसक्नुले गर्दा बजार १६०० माथि बस्न नसकेको प्रस्ट देखिन्छ।
ट्रेडिङ्ग, उत्पादन तथा प्रसोधन र म्युचअल फण्ड उपसुचकमा मात्र वृद्धि देखिएको र अन्य सबै उपसुचकमा गिरावट आएको छ । हाईड्रोपावर उपसुचकमा भने आज निकै ठूलो गिरावट देखिएको छ । हाईड्रोपावर उपसुचकमा आज २ प्रतिशत माथिको गिरावट देखिएको छ।
केही दिन अघि १६०० को विन्दु माथि बजार बस्न सफल भए पनि त्यसपश्चात भने बजारमा पुन बिक्री चाप आएको थियो । यसको अर्थ बजारलाई १६०० को विन्दु अहिलेको लागि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै गारो देखिएको छ। यो विन्दुमाथि बजार केही समय रहन सकेकोमात्र अब बुलिश यात्रा देखिने जानकार बताउँछन् ।
✍ आज शेयर कारोबार खुलेदेखि बजार घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ । आजको मैनबत्तीले “बियरिस” मैनबत्तीको आकृति बनाएको छ, यसले बजार केही सच्चिन सक्ने संकेत गरेको छ । आजको परिमाण भने सामान्य रहेको छ ।
✍ दैनिकी अवधिमा “आरएसआई” ५७ को बिन्दुमा छ। यसको प्रवृत्तिले आज बजारमा विक्रेताको चाप रहेको जानकारी गरेको छ।
✍ “एडीएक्स” र जोड / बिजोड “डाइरेक्सनल इन्डेक्स”हरुले पनि बजारमा विक्रेताको चाप रहेको जानकारी गराएको छ। “अन ब्यालेन्स भल्यूम” ले बजारमा माग बढी रहेको जानकारी गराएको छ।
✍ यदि बजार १६१५ भन्दा माथि स्थिर रहेमा बजार अझ केही सकारात्मक हुन सक्ने देखिन्छ । हालको तत्कालिन टेवा १५४० को क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । नेप्से १५४० भन्दा माथि स्थिर रहनु भनेको बजार सकारात्मक क्षेत्रमा रहनु बुझिन्छ ।
विकास बैंकले किन ततायो बजार ? आजको बजार बिश्लेषणले के देखायो ? ३ हप्ता पहिले
सेनेगलको समुद्री इलाकामा डुंगा डुब्दा १४० को मृत्यु ३ घण्टा पहिले
पछिल्लो २४ घन्टामा थप १६ जनाको मृत्यु ३ घण्टा पहिले
आज उपत्यकामा १८८८ संक्रमित, ४४ हजार २८८ जना डिस्चार्ज ४ घण्टा पहिले
प्राकृतिक ‘भ्यु प्वाइन्ट’ खोपारा लेक ७ घण्टा पहिले
अमेरिकी चिप्सहरु बिक्री रोकेसँगै प्रविधिका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने चीनको योजना ६ घण्टा पहिले
भक्तपुरमा कोरोना संक्रमित संख्याकाे पाँच हजार नाघ्यो ८ घण्टा पहिले
अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला ४ घण्टा पहिले
तातोपानी नाकाबाट दुई कन्टेनर स्याउ भित्रियो २१ घण्टा पहिले
काजल आज बैबाहिक जीवनमा बाँधिदै ८ घण्टा पहिले
बिपीमा कोभिड–१९ अस्पतालमा चरम लापरवाही २१ घण्टा पहिले
सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण १ दिन पहिले
म्याग्दीको खड्गभवानी कोतमा मौलो पूजासहित सामूहिक टीका २ दिन पहिले
प्रशासनको आग्रह बेवास्ता गर्दै क्रसर उद्योग पुनःसञ्चालन ५ दिन पहिले
आइसिटी अवार्ड २०२० मा उत्कृष्ट ५ को घोषणा, कार्तिक १२ गतेदेखि पब्लिक भोटिङ शुरू हुदै ७ दिन पहिले
अब हराएको लाईसेन्स, विलबुकको सेवा ट्राफिक अनलाइनबाटै घरमै बसीबसी २ दिन पहिले
पोखरिया प्रहरीमा खुलेयाम घुस असुली, चालिस हजार घुस नदिदाँ भन्सारमा २ हप्ता पहिले
ट्राफिकले फेला परेका मोटरसाइकल धनीलाई जिम्मा लगाए ३ हप्ता पहिले
अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारमा पत्रकार भुवन केसी नियुक्त १ हप्ता पहिले
पर्यटकीयस्थल कंके देउराली जाने सिंढी १ हप्ता पहिले
हरियो रङसहित साइकल लेन १ हप्ता पहिले
गण्डकीमा ३ महिनामै दुर्घटनाले ३९ जनाको ज्यान लियो २ हप्ता पहिले
प्रहरी असई र जवानको घाटी रेटेर हत्या गर्ने ७ जना तस्कर सार्वजनिक १ हप्ता पहिले
प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गर्ने एक जना पक्राउ १ महिना पहिले
भ्रमण वर्ष २०२० लाई क्रसर व्यवसायीको चुनौती, त्रिशूलीमा जलयात्रा व्यवसाय सङ्कटमा १ वर्ष पहिले
नेपाल एयरलाइन्सको जहाज चीनको चाङ्सातर्फ उड्यो ६ महिना पहिले